Tombontsoa 7 ambony amin'ny Semax tokony ho fantatrao alohan'ny fampiasana - Phcoker
Amin'ny lafiny iray, misy ihany koa ny valim-pikarohana momba ny fitsaboana momba ny fomba ahafahan'ny fanafody manampy amin'ny fampihenana ny tebiteby ary koa manatsara ny fahatsaran'ny mpampiasa. Ny Semax dia ampiasaina ho toy ny zotram-poitra mahazatra, saingy manana fampiasana fanampiny toa ny fampitomboana ny fahasalaman'ny atidoha ary amin'ny fampisondrotana ny hery fiarovana amin'ny hery hafa. Ny tombontsoa Semax dia tsy azo tsapain-tanana ihany rehefa alaina amin'ny fomba marina ny fanafody. Na izany aza, alao antoka fa hahazo torolàlana momba ny fampiasana avy amin'ny dokoteranao ianao hahazoana vokatra sy traikefa tsara kokoa.
Semax (80714-61-0) dia fanafody peptide novolavola tao Rosia tao amin'ny 1980 mba hanampy amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny aretina toy ny fahatapohana. Androany ankehitriny, ny tebiteby Semax dia voatanisa ao amin'ny lisitry ny zava-mahadomelina Rosiana taorian'ny fanaporofoana ny mahomby amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana samihafa.
Ny dokotera koa dia manondro an'i Semax ho toy ny zava-mahadomelina nootropic taorian'ny nahatsapa fa afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsarana ny fampahatsiahivana ary hampihena ny adin-tsaina. Na dia nankatoavin'i Rosia sy i Ukraine aza ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io, ny firenena hafa toa an'i Etazonia dia mbola hanaiky izany na dia eo aza ny nanaporofo fa tena ilaina izy amin'ny fikarakarana ny toe-pahasalamana samihafa. Na izany aza, tsy manakana anao tsy hampiasa vovony Semax izany.
Ankoatra ny vovobony Semax mahazatra, misy ihany koa ny fiovana roa eo an-tsena, fa saika mitovy amin'ny fomba fiasa. Anisan'izy ireo ny Na-Semax-Amidate sy N-Acetyl. Amin'izao fotoana izao, tsy misy fandalinana midadasika izay namboarina na tahirin-kevitra momba ireo andiany roa Semax. Na izany aza, avy amin'ny tsikera Semax, misy ny mpampiasa nitatitra fa Na-Semax-Amidate dia manatanjaka ny fampivoarana fifantohana kanefa ny N-Acetyl Semax dia manome hery bebe kokoa. Ny valin'ny Semax dia mety miovaova isaky ny olona iray mankany amin'ny iray hafa, arakaraka ny fomba fihetsiky ny vatana amin'ny fatra. Malalaka ihany koa ianao hanandrana ny dikan-demaody Semax nefa azonao antoka fa mampiditra ny dokoteranao ianao amin'ny fizotran'ny dosage manontolo.
The Ny vovony Semax misy amin'ny fivarotana an-tserasera sy ara-batana manodidina anao izay ahafahanao manao ny baikonao amin'ny fotoana rehetra. Mividia amidy Semax amin'ny mpivarotra azo atokisana sy mpamatsy. Tsy ny mpivarotra zava-mahadomelina avokoa no manome vokatra tsara ary ilaina foana ny mandalina ny mpamatsy Semax alohan'ny hanaovana ny baikonao. Fantaro ny fomba fiasan'ny fivarotana ary hafiriana izany vao azonao ny Semax (80714-61-0).
Ilaina ihany koa ny mandeha fitsaboina alohan'ny hanombohana an'io fanafody io. Ny varotra Semax amidy dia fanafody fanafody, ary noho izany, ny dokotera dia tokony ho olona mety hametraka ny fatra mety ho anao rehefa avy mandinika ny toetranao ianao. Ny fizotry ny fitsaboana koa dia mila fanaraha-maso ny matihanina amin'ny matihanina ho amin'ny vokatra tsara kokoa.
Rehefa nividy Semax (80714-61-0), atsaharo amin'ny alalàn'ny zaza sy ny vata fampangatsiahana satria mety manimba toy ny peptides hafa. Ho an'ny tsara kokoa, traikefa Semax, antoka fa manaraka ny toromarika rehetra ianao. Aza atao mihitsy ny manitsy ny fatra raha tsy mampahafantatra amin'ny dokotera anao.
Tahaka ny efa voalaza teo aloha, Semax peptide dia ilaina amin'ny tontolo ara-pitsaboana, indrindra amin'ny fitsaboana ny fepetra samihafa. Any Rosia, nekena ny zava-mahadomelina taorian'ny nahatsapa fa afaka manampy amin'ny fifehezana ny aretin-tohatra toy ny lalan-drà. Na izany aza, ny fanadihadiana Semax izay natao nandritra ny taona maro dia nanambara aretina hafa izay afaka mitsabo tsara ny zava-mahadomelina.
Ireo firenena na dokotera samihafa dia mampiasa Semax hitsaboana ny toe-pahasalamana isan-karazany. Ny tsimokaretina Semax dia ampiharina amin'ny intranasally, fa ny latsaka fotsiny dia miankina amin'ny fahasalaman'ny fahasalamana eo ambanin'ny fitsaboana. Misy ihany koa ny endrika Semax tsindrona izay tokony hokarakarain'ny mpiasan'ny fahasalamana. Aza hadino hatrany ny mitahiry ny zava-mahadomelina ao anaty vata fampangatsiahana.
Ny BDNF dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fahavelomana sy ny aretin-kozatra ary ny fahatapahan-java-mihetsika. Ny ambaratonga ambany BDNF dia mety mitarika na manimba ny fahaketrahana sy ny ahiahy. Araka ny fatrany aminao amin'ny lafiny ratsy kely indrindra, ny Semax dia nanaporofo ihany koa fa mpanatsara BDFN tena mahay sy antidepresanina. Ny fanafody dia afaka manatsara ny famokarana BDNF hividy hatramin'ny 800%.
ny soritr'aretina mifandraika amin'ny ADH, ny tebiteby, ary ny hakiviana. Ny fitomboan'ireto neurotransmitters rehetra ireto dia mamporisika ny antony, manatsara ny fifantohana sy ny vokatra.
Ny Neurotransmitters toy ny enkephalins dia misy fiantraikany amin'ny fiheverana, ary rehefa mitombo izy ireo, dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famoronana fahatsiarovana sy ny fifehezana ny toe-po. Fikarohana ara-pitsaboana izay natao tany Rosia, momba ny mpiasa salama tsara. Ny vovony Semax nanatsara ny fitadidiana sy ny fitandremany ny fitadidiana. Ny fikarohana siantifika dia nanolo-kevitra fa ny fampiroboroboana ny ra mivezivezy tsara sy ny fiarovana ny oxidative ao anaty atidoha olombelona dia mampitombo ny fitadidiana.
Ny fitomboan'ny haavon'ny BDNF ao amin'ny hippocampus dia voalaza koa fa tena ilaina amin'ny fanatsarana ny fitadidiana satria ny hippocampus no ivon'ny atidoha sy ny fitadidiana. Amin'ny lafiny iray, BDNF koa dia manampy amin'ny fanatsarana fampatsiahivana, fahatsiarovana ary fahaizana hianatra sy hitahiry ny fampahalalana vaovao. Ny BDNF dia mandrisika ny famokarana Neurogenesis, izay taranaka lalan'ny nerve ao amin'ny atidoha izay manampy amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny atidoha sy ny fanodinana.
Amin'ny siantifika, ny BDNF dia proteinina izay manasongadina ny fahasalaman'ny atidoha amin'ny alàlan'ny fiarovana sy fanamafisana ny sela amin'ny atidohanao, fampiroboroboana ny sela amin'ny atidoha, ary mampirongatra ny tsy fahaizan'ny atidoha ankapobeny. Matetika, misy ny nootropic izay mampitombo ny haavo BDNF dia mampitombo ny fahatsapana ao amin'ny mpampiasa maro, ary ny Semax dia voaporofo fa ohatra tonga lafatra amin'ny fanamafisana mahery vaika BDNF.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny kitapo Semax dia ampiasaina hanatsarana ny toe-po ary ho fanafody fialamboly. Izany dia satria mampitombo ny hetsika dopamine sy serotonin ao amin'ny vatanao, izay ny neurotransmitters manana fiantraikany lehibe amin'ny tebiteby sy ny famoizam-po. Nandritra ny taona maro izay, ny medika dia nanohy ny fahitana ny toe-pahasalamana isan-karazany izay azon'ny Semax.
Ny fatra Semax dia miankina amin'ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny fitsaboana, ary ny fatra dia tokony hapetraky ny matihanina matihanina. Ny soso-kevitra Dosis Semax ao amin'ny 300mcg ka 600mcg. Na izany aza, manoro hevitra ireo mpampiasa vaovao hanomboka amin'ny dosage ambany, izay azo amboarina any aoriana any ataon'ny dokotera aorian'ny fanaraha-maso ny valin'ny vatanao amin'ny zava-mahadomelina.
Miaraka amin'ny zava-mahadomelina, tsy misy olona tokony hampidi-doza hampihena fatrany ambony manomboka amin'ny mety hitera-doza lehibe. Mba hialana amin'ny mety ho loza mifandraika amin'io fanafody io toy ny tsy fahampiana Semax volo dia tsara foana ny mandeha amin'ny fizahana ara-pitsaboana alohan'ny handraisana an'io fanafody io na inona na inona antony.
Ny Semax dia nalaina tamim-panafody, ary tokony alatsaka ny 2 na 3 kely fotsiny ny orona kely isaky ny orony dia indroa na intelo isan-andro isan'andro mandritra ny fihodinan'ny dokotera. Ny toe-javatra sasany toy ny rehefa maka Semax ho an'ny vanim-potoana fanarenana aorian'ny fitsaboana dia tokony handray ny rano mitete 4 ianao, in-enina isan'andro. Ho an'ny fahatsiarovan'ny Post narcosis na fikorontanan'ny saina, ny fatra azo anaovana dia ny rano 3 dia mihena ao anaty orona tsirairay intelo isan'andro. Semax ho an'ny fahakiviana 2 amin'ny 3 dia mianjera amin'ny orona tsirairay, in-telo isan'andro isan'andro no fatra fangatahana.
Be loatra Tsindrona Semax dia manome safidy tsara indrindra amin'ny fatra amin'ny ilany, antoka tsara fa hahazo ny tsindrona avy amin'ny dokotera ianao. Ny fepetra samihafa dia mitaky fatra samihafa. Ny fizahana fizahana ara-pitsaboana koa dia hitarika ny mpitsabo anao amin'ny fametrahana fatra mety ho anao. Ny fatra Semax dia tokony ho eo anelanelan'ny 300mcg mankany 600mcg.
Ny fatra dia azo ahena kokoa arakaraka ny fomba nandraisan'ny vatanao ny dosageor tsindrona Semax voalohany. Raha tsy azonao antoka ny momba ny tsindrona ny tenanao, azonao atao ny mangataka ny dokoteranao hampiofana anao na hanomana fotoana hitsidihana tsy tapaka ny fatra-nao. Aza atahorana ny hanindrona ny tenanao raha tsy hainao ny manao izany satria mety hiteraka fitsaboana hafa.
Ny zava-mahadomelina dia nanasongadina ny fanandramana ara-pitsaboana isan-karazany momba ny olombelona, ​​ary saika ny fitsapana rehetra dia mitatitra tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny Semax. Izany no mahatonga an'i Semax ho iray amin'ny aotropika azo antoka indrindra amin'ny tsena ankehitriny. Any Rosia, Semax dia ilaina ho an'ny fitsaboana ireo aretina ara-pitsaboana isan-karazany toy ny aretin'andoha migraine, fahatapohana ary fikorontanana.
Ny voka-dratsin'ny lafiny Semax vitsivitsy dia notaterin'ireo mpampiasa Semax sasany toy ny vovoka maina, ny hatsembohana sy ny fisalasalana ary ny torimaso. Semax sy ny fihenan'ny volo dia fiantraikany hafa mahazatra izay notaterin'ny mpampiasa Semax sasany. Ireo fiantraikany rehetra ireo dia zara raha notaterina, fa ny fikajiana no afaka mifehy azy ireo. Tsy mitovy ny vatan'olombelona ary raha sendra misy fiantraikany ratsy hafa amin'ny Semax ianao, dia ampahafantaro ny dokotera avy hatrany ny fanampiana anao.
Tsara ny mandinika ny fametrahana ny Semax miaraka amin'ny Phenylpiracetam noho ny famoretana angovo izay mety hateraka amin'ny alàlan'ny fisotroana io zava-mahadomelina io. Phenylpiracetam dia zava-mahadomelina mampientam-po mampientam-po fa mihetsika miadana. Amin'ny lafiny iray, mpampiasa maro no nitatitra fa mahazo tombony Semax manan-danja rehefa mampifangaro azy ireo amin'ny manaitaitra hafa toy ny curcumin izy ireo izay manome alàlan'ny angovo mikoriana maharitra ao amin'ny vatana.
Ireo fanafody roa ireo dia tsy mitovy amin'ny fomba ampiasainy hitondrana ny olana ara-pahasalamana samihafa. Semax dia mahery vaika amin'ny fanatsarana ny fahatsapana sy ny hakiviana, raha Selank kosa dia manome valiny kalitao rehefa ampiasaina ho anti-tebiteby. Na izany aza, ny fanafody roa dia mampitombo ny haavon'ny BDNF, ary indraindray azo itambatra, araka ny efa voalaza teo aloha. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny Semax vs Selank dia miresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana.
Raha any Rosia ianao, i Semax dia amidy eo ambany fijerin'ny dokotera. Any Etazonia, ny zava-mahadomelina dia voafehifehy, na dia tsy neken'ny FDA aza. Midika izany fa afaka miditra aminy amin'ny alàlan'ny fivarotana nootropic an-tserasera ianao. Manoro hevitra hatrany ireo mpampiasa Semax izahay mba hitandrina tsara sy haka ny fotoanany hahazoana ny mpamatsy Semax tsara indrindra. Ataovy ny fikarohana ataonao, jereo ny valin-kevitry ny mpanjifa mba hahafantarana ny fomba fiasan'ny mpamatsy Semax alohan'ny hanaovana ny baikonao. Aza adino fa tsy ny mpivarotra Semax izay hitanao eny amin'ny tsena dia azo atokisana.
Ny vaovao tsara dia isika mpamatsy Semax mpanafika eto amin'ny faritra. Azonao atao ny mandray ny baikonao ao amin'ny tranokalanay ary azonao antoka fa handray ny vokatrao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Semax amidy sy Semax stack dia azo alaina daholo ao amin'ny fivarotana an-tserasera serasera misy anay.
Mikarakara izahay Mpamatsy semax mpamatsy, ary noho izany, dia mampitandrina ny mpanjifanay rehetra izahay mba tsy handray ny zava-mahadomelina raha tsy manao fitsirihana ara-pitsaboana na manao dokotera matihanina amin'ny tsingerin'ny dosage. Ampahafantaro azy ny dokotera avy hatrany fa misy voka-dratsy lehibe.